SIRQARINTA BEERASHADA GUULAHA EE WEIGELA: BEERASHADA IYO DARYEELKA GURIGA - DHIRTA GUDAHA
Ugu Weyn Ee Dhirta gudaha
Sida loo koro weigela qolkaaga, beeritaanka iyo daryeelidda warshad
Weigela - Warshadani waxay ka timaadaa caleenta geedo gaajo leh, qoyseedka qoyan. Waxaa jira 15 nooc oo ah weigela, kuwaas oo 7 nooc oo la beeray, iyo sidii geed loo dhisey, kaliya weigela waa ku habboon yahay hybrid. In dabeecadda furan, dhirta inta badan ku koraa bari iyo koonfur bari Asia.
Ma taqaanaa? Weigela waxaa loo magacaabaa ka dib bareerka beeraha, kimistaanka iyo sameynta Jarmalka, K.E. von Weigel, oo furay geedkii.
Weigela baadiyaha: sharaxaadda dhirta
Weigela - Tani waa geedo dilaacsan oo leh caleemo qumman. Stolonov ma sameeyo. Cagaar leh cufan cad, caleemaha lafdhabarashada ayaa ku yaal meel ka soo horjeeda, ma haystaan ​​shuruudo.
Warshadu waxay u nugul tahay dib-u-ubax, ubaxuna waa weyn yahay (illaa 5 cm), funniga-qaabeeya. Waxaa lagu ururin karaa inflorescences (ilaa 6 pcs) ama hal. Midabku waa ka duwan yahay: laga bilaabo caddaan ilaa casaan.
Astaamaha weigela waa isbeddel xagga hooska ah inta lagu jiro geedi socodka ubaxyada oo ka soo jeeda mid ka mid ah shidaal. Miro waa sanduuq yar oo leh miraha yar yar. Qaar ka mid ah noocyo kala duwan yihiin. Weigela wuxuu ku nool yahay 20-30 sano.
Doorashada meel loo beerto weigela
Markaad dooranaysid meel aad beerto, xasuuso inaad u baahan tahay inaad siiso dhirta xaaladaha sida ugu dhow ee suurtogalka ah kuwa dabiiciga ah.
Waa maxay iftiinka
Weigela, mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee beerashada iyo daryeelidda guriga waa nalal ku filan. Waa inay jirtaa iftiin badan, laakiin aan lahayn qorraxda tooska ah.
Dariishadaha galbeedka iyo bariga, kuwaas oo bixiya iftiin qurux badan, laakiin si fiican u shaqaynaya. Haddii aad geedka ku dhigto daaqada koonfureed, ka dibna ha iloobin inaad iska xejisid. Markaad dhererka ku dhejiso dhinaca woqooyiga - iftiinka ayaa ku filnaan kara.
Heerkulka iyo qoyaanka koritaanka guusha
Xilliga xagaaga, heerkulka qolka wuxuu ku habboon yahay weigela, iyo xilliga qaboobaha, heerkulku waa inuu noqdaa + 12 ° C ... + 18 ° C.
Warshad uma baahna qoyaan sare, laakiin buufinta joogtada ah (caleemaha oo keliya, ma aha ubax) ma noqon doonto mid aad u sarreeya. Waxaad si fudud u tirtiri kartaa caleenta leh arin qoyan.
Sida loo abuuro weigela guriga
Geedka geedo wanaagsan ka fiican da'da 3 sano. Nidaamka waxaa la doorbidaa guga. Qalmaca xididada oo u adkee substrate si aaney u jirin hulalka meel u dhow xididada. Ha qodin collar xidid ka badan 1-2 cm.
Sida loo doorto dheriga beerta
Dheriga waa in la sarreysiiyaa oo dhexdhexaadiyaa. dhowr santimitir oo isir ah. Haddii ujeedadu tahay geed geed dabiici ah, ka dibna dooran dherer ballaaran oo hooseeya.
Waa muhiim! Wixii koritaanka caafimaadka ee weigela, godadka dheecaanka ee waaweyn ayaa loo baahan yahay dheriga. Lakab qaro oo dheecaan ah waa in lagu rakibaa hoose ee taangiga, iyo dusha sare ee ciidda, agagaarka geedka - ku dar duubka lakab khafiif ah.
Waa maxay carrada
Weigela wuxuu jecel yahay nafaqo, nafaqo leh, carrada dabacsan oo leh falcelin dhexdhexaad ah ama waxoogaa alkaliin ah. Bacaha amase loamy suurad wacan. Waxaad sameysan kartaa isku darka ciidda adoo isku dari kara carrada qalafsan oo leh ciid iyo carrada cagaarka ah 2: 2: 1. On ciidda overmoistened, weigela blooms si liidata.
Nidaamka beeritaanka ee geedkan wuxuu ka kooban yahay algorithm soo socda.
Samee dalool (30-40 cm qoto dheer).
Geedaha dhirta la daweeyo kiciyaha kobaca.
Markaad beerto, hubso in qoorta xididku aanu si qoto dheer loo aasi jirin.
Iyadoo ku xiran kala duwan ee kala duwan ee weigela hybrid, dhig ubaxyo fogaan ah 2 mitir (noocyo waaweyn) ilaa 80 cm (kuwa hoose).
Ka dib markii laga beerto waxay u baahan tahay waraabin badan.
Xeerarka Daryeelka Qolka
Isaga oo ka hadlaya beerista weigela ee guriga, waxaa muhiim ah in la qeexo ma aha oo keliya sawirada muhiimka ah ee beerto, laakiin sidoo kale in laga hadlo ku saabsan daryeelka.
Waraabinta iyo quudinta dhirta
Inta lagu jiro muddada koritaanka firfircoon (gu'ga-xagaaga) waxaa lagama maarmaan ah in ay si joogto ah u biyaha, laakiin dhexdhexaad ah. Dhismuhu waa inuu mar kasta qoyo, isla mar ahaantaana, hubi in biyaha uusan istaagin. Xilliga dayrta iyo jiilaalka, waraabinta ayaa yareysa.
Waa waxtar leh mar sanadkii, guga hore, si bacrimiya ciidda leh humus. Waxay kicisaa koritaanka caleenta dhalinta yar iyo caleemaha.
Si ubaxu wuxuu ahaa badi iyo muddo dheer - guga dabayaaqadii - horraantii xagaaga, dalbashada Bacriminta fosfate-potassium. Sidoo kale cimilada kulul, dhar xidhashada fosfoorka, taas oo si wax ku ool ah u saameyn doonta midabka caleemaha, ma noqon doonto mid aad u macquul ah.
Sidee loo sameeyaa manjooyin
Sababtoo ah koritaanka degdegga ah, weigela wuxuu u baahan yahay manjooyin joogto ah. Haddii aad rabto inaad sameysid warshad leh baadiyaha, ka dibna si joogto ah u gaabisaa caleemaha ilaa dhererka dhererkooda, iyo haddii geed mugdi leh leh tufaax tufaax ah - ka tag oo kaliya garbaha oo ku dhaji dhererka la doonayo.
Si loo abuuro taaj iyo kicinta koritaanka caleemaha cusub, gooyaa ugu fiican ee lagu sameeyo dayrta, isla markiiba ka dib ubax. Guga, ka saar cutubyo jirran iyo jirran.
Ma taqaanaa? Farshaxanka bonsai waxaa badanaa lagu bilaabaa inuu barto walwalka. Waxay leedahay barar xoog leh oo ka caawisa inay u dulqaado dhammaan marxaladaha bonsai formation.
Marka loo baahan yahay warshad, iyo waxa loo baahan yahay
Weigela qashinka waxaa lagu sameeyaa gabbasho iyo kaliya marka loo baahdo, haddii nidaamka xididka uu ku dhow yahay dherigii hore. Warshadani ma jecla in ay dhibtooto. Dhammaan baahida loo qabo isu tallaalidda waa taan cusub, substrate iyo dheecaan. Ku saabsan waxa carrada iyo awoodda ay ku dooranayaan, ayaa hore loo qorey.
Qeybta taranka oo si aan caadi aheyn loo isticmaalo
Weigela gudaha wuxuu ku dhufan karaa laba siyaabood: gooyn iyo abuur.
Wajiga Weigela ee guriga by gooyn, bilowga xagaaga, ka gooyay caleemaha, aan-lignified, 10-15 cm dheer oo leh 2 internodes. Ka saar caleemaha hoose iyo jarjar caleemaha sare qeybtii.
Gooyn 1-2 saacadood biyo, ka dibna ilaa 12 saacadood, ku rid kiciyaha kobaca. Qolku waa inuu noqdaa madow, oo heerkulku waa inuu ku jiraa + 20 ° S ... + 25 ° C.
Waa muhiim! Inegel weigela, qaybta hoose waa in ay ahaato mid toos ah, tan iyo caleemaha geedka this waxaa loo habeeyay iska soo horjeeda.
Xoq gooyn 1 cm galay isku dar ah peat iyo ciid, daboolay lakabka ciidda 4-cm. Ku dabool nuqul kasta oo leh filim, dhalo ama dhalo.
Hawo iyo biyo gooyn laba jeer maalintii. Kadib labo usbuuc oo xididdo ayaa dhici doona.
Miisaanku wuxuu ku faafay by gooyn, ubaxyada markii ugu horeysay ee da'da laba.
Abuurka Weigel wuxuu luminayaa biqilkooda hal sano ka dib goosashada, sidaa daraadeed kaliya kuwa cusub waa ku haboon yihiin taranta. Diyaargarow horay looma baahna. Beer guga.
Ka sarreeya, weel ku jira godad hoose, buuxi ciidda iyo dheecaan, daadi miraha, qoyan iyo daboolo dhalo ama filim. Ku rid meel qorrax leh. Caleemaha waa inay soo muuqdaan ilaa 21 maalmood, waxay noqon karaan kuwo saaxiibtinimo.
Tartiib xoog leh oo ka yimaada dhirta iyo cagaarka oo laga helo xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo. Marka 4 caleemo la dhiso - ku shub geedo qashin kala duwan, ka dib marka nidaamka xididku uu buuxiyo, waxaad bedeli kartaa "deganaanshaha" ku meel gaar ah leh dherooyin joogto ah oo cabbir ku haboon. Kala saarista habkan duurka ayaa jiri doona ilaa 5 sano.
Sida aan aragno sida noocan oo kale ah sida weigela, waa suurtagal in la koro guriga, haddii aad raacdo xeerarka aasaasiga ah ee beerto iyo daryeelka, iyo sidoo kale dhalmo. Marka aad muujiso dadaal yar oo baadiyaha ah waxay ku siin doontaa sababo badan oo farxad leh.
Noocyo qajaar la mid ah Parthenocarpic
Noocyo baradho ah oo Belarusian Uladar - dhadhan weyn iyo sahlan ee beerashada
Sanadkii 2018, 16.9 kun oo oo dabacas ah ayaa laga helay gobolka Stavropol
Barafka iyo karkarinta biyaha ee la dagaallanka ku dul-noolaashaha: Waa maxay heerkulka ay cayayaanka u dhintaan, ma la qaboojin karaa ama la qaboojin karaa?
Ubaxa Dabiiciga ah Tacca Chantrier ama Black Lily: Beauty Legendary
Habboon - Fungicide - sida loo codsado
Kiniiniga Digaaga Digaaga
Noocyo Faleebo ah oo loogu talagalay Dhulka Furan
Waxaa ka mid ah noocyo sabiib ah oo khamri ah "Viorica" ​​caan ku ah dhadhanka aan caadi ahayn ee quruxda badan iyo iska caabin ah dhaxan. Maqaalkani waxaan ka hadli doonaa muuqaalka iyo sifooyinka canabkiisa "Viorica", taariikhda xulashada, iyo sidoo kale sida loo koro guriga. Taariikhda noolaanshaha Si loo isku daro faa'iidooyinka kala duwan ee noocyada kala duwan ee sabiib ah, jaangooyuhu wuxuu isticmaalaa dhexgelinta - ka gudbidda noocyo kala duwan. Read More
Gowracaha guurka ah ee naaska-naaska: sida ay u egyahay, sida loo daryeelo iyo sida loo quudiyo guriga
Xusuusi ninkii beerta ka shaqaynayay: Nuances of yaanyada beerto ee lagu koriyo iyo aqalka dhirta lagu koriyo
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Dhirta gudaha 2020